ပြောင်း ရွှေအောင်စ (XAU) အွန်လိုင်း, ငွေကြေး ပွောငျး
ပွောငျး ရွှေအောင်စ (XAU)
သငျသညျ ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ရွှေအောင်စ (XAU) နိုင်ငံခြားငွေကြေးအွန်လိုင်းရန်။ ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး, နှင့် 2500 cryptocurrencies. ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ရွှေအောင်စ ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
XAU – ရွှေအောင်စ
ရွှေအောင်စ ၏ငွေကြေးဖြစ်ပါသည်: . ရွှေအောင်စ ထို့အပြင်ဟုခေါ်သည်: ရွှေအောင်စ.
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် ရွှေအောင်စ လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ပြောင်း ရွှေအောင်စ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေးရန်
ရွှေအောင်စXAU သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1916.08ရွှေအောင်စXAU သို့ ယူရိုEUR€1622.35ရွှေအောင်စXAU သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1467.42ရွှေအောင်စXAU သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1743.99ရွှေအောင်စXAU သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr17034.79ရွှေအောင်စXAU သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.12083.45ရွှေအောင်စXAU သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč42414.19ရွှေအောင်စXAU သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł7137.78ရွှေအောင်စXAU သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2534.32ရွှေအောင်စXAU သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2682.64ရွှေအောင်စXAU သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$42528.35ရွှေအောင်စXAU သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$14850.64ရွှေအောင်စXAU သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$10286.46ရွှေအောင်စXAU သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹143442.23ရွှေအောင်စXAU သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.323508.09ရွှေအောင်စXAU သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2631.09ရွှေအောင်စXAU သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2935.21ရွှေအောင်စXAU သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿59521.94ရွှေအောင်စXAU သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥13312.45ရွှေအောင်စXAU သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥204876.65ရွှေအောင်စXAU သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2272446.83ရွှေအောင်စXAU သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦742393.43ရွှေအောင်စXAU သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽140308.11ရွှေအောင်စXAU သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴52651.62
ရွှေအောင်စXAU သို့ BitcoinBTC0.166 ရွှေအောင်စXAU သို့ EthereumETH4.99 ရွှေအောင်စXAU သို့ LitecoinLTC35.24 ရွှေအောင်စXAU သို့ DigitalCashDASH21.12 ရွှေအောင်စXAU သို့ MoneroXMR21.52 ရွှေအောင်စXAU သို့ NxtNXT149473.08 ရွှေအောင်စXAU သို့ Ethereum ClassicETC282.43 ရွှေအောင်စXAU သို့ DogecoinDOGE553017.82 ရွှေအောင်စXAU သို့ ZCashZEC23.26 ရွှေအောင်စXAU သို့ BitsharesBTS59034.3 ရွှေအောင်စXAU သို့ DigiByteDGB61314.43 ရွှေအောင်စXAU သို့ RippleXRP6805.9 ရွှေအောင်စXAU သို့ BitcoinDarkBTCD66.05 ရွှေအောင်စXAU သို့ PeerCoinPPC6357.54 ရွှေအောင်စXAU သို့ CraigsCoinCRAIG873174.94 ရွှေအောင်စXAU သို့ BitstakeXBS81720.64 ရွှေအောင်စXAU သို့ PayCoinXPY33454.68 ရွှေအောင်စXAU သို့ ProsperCoinPRC240448.36 ရွှေအောင်စXAU သို့ YbCoinYBC1.03 ရွှေအောင်စXAU သို့ DarkKushDANK615002.87 ရွှေအောင်စXAU သို့ GiveCoinGIVE4150680.21 ရွှေအောင်စXAU သို့ KoboCoinKOBO436597.05 ရွှေအောင်စXAU သို့ DarkTokenDT1764.9 ရွှေအောင်စXAU သို့ CETUS CoinCETI5535025.87
1 USD to INR2020-08-14 04:09:53
1 USD to IRR2020-08-14 04:06:13
1 USD to MXN2020-08-14 04:03:55
1000 INR to UCN2020-08-14 04:03:13
0.65 HKD to USD2020-08-14 03:48:30
1.79 USD to MXN2020-08-14 03:45:30
1 USD to BTC2020-08-14 03:40:13
25 USD to BTC2020-08-14 03:39:30
267500 JPY to USD2020-08-14 03:34:38
7200 USD to CAD2020-08-14 03:34:29
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 04:10:02 +0000.